Eken'ny rehetra ny fisian'ny fitaovana finday. Amin'ny tsena maro amin'izao fotoana izao – indrindra any amin'ny tany an-dalam-pandrosoana – dia tsy resaka finday fotsiny ihany fa finday ihany. Ho an'ny mpivarotra, ny areti-mifindra dia nanafaingana ny fifindran'ny nomerika miaraka amin'ny fahafahan'ny mpampiasa mikendry ny mpampiasa amin'ny alàlan'ny cookies an'ny antoko fahatelo. Midika izany fa vao mainka manan-danja kokoa ankehitriny ny fantsona finday mivantana, na dia marika maro aza no mbola mitambatra mangingina sy tsy mitovy.
Soundtrap: Mamorona Podcast Voaroaka amin'ny Vahiny ao amin'ny rahona
Talata, Oktobra 20, 2020 Talata, Oktobra 20, 2020 Douglas Karr
Raha efa te-hamorona podcast ianao ary hitondra vahiny, fantatrao fa sarotra be izany. Mampiasa ny Zoom aho izao mba hanaovana izany satria manolotra safidy marobe izy ireo rehefa manoratra… manome antoka fa afaka manova ny làlan'ny tsirairay avy aho. Mbola mitaky ny hanafarako ireo làlam-peo ary afangaro ao anaty Garageband aho. Androany aho dia niresaka tamin'ny mpiara-miasa amiko Paul Chaney ary nizara fitaovana vaovao tamiko izy,